Accueil > Gazetin'ny nosy > Ady ho Praiminisitra: Efa-dahy sy efa-bavy no miady ny toerana
Ady ho Praiminisitra: Efa-dahy sy efa-bavy no miady ny toerana
Androany alakamisy faha 31 may 2018 no fe-potoana farany napetraka ny HCC (Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana) tsy maintsy hanendren’ingahy Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena izay ho praiminisitra hitantana ny governemanta ny marimaitra iraisana. Noho izany dia tsy maintsy voatendry androany izay izay ho praministra fahefatra amin’izay fanjakana izao. Ny tsy fahatanterahan’izany dia efa tsy fanarahan-dalàna hafa koa ataon’ny filohan’ny repoblika toa ny nataony hatramin’ny taona 2014 nitondrany.
Raha ny zava-misy ankehitriny dia toa manaraka ity lalàna ity ireo mpifanandrina amin’ny andaniny roa. Ny etsy amin’ny kianjan’ny 13 may izay tarihin’ireo depiote 73 dia efa niova ny kabary ka dia ny resaka governemanta sy ny praiminisitra hitarika azy ity no ambetin-dresaka amin’izao fotoana izao.
Ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay antokon’ingahy Rajaonarimampianina sy ireo depiote 79 mpanara-dia azy kosa tsy nanda fa manaiky ity fanapahan-kevitra pôlitika noraisin’ny HCC ity.
Raha ny loharanom-baovao misy amin’izao fotoana izao dia miady mafy ny hahazo ny toeran’ny praiminisitra avokoa ny antoko pôlitika ao amin’ny vondron’ny mpanohitra sy ny mpomba fitondrana amin’izao fotoana izao. Tsy izy ireo ihany nefa fa hatramin’ny Frantsay sy ny fikambanana iraisam-pirenena koa dia fantatra fa manisika be ny olony ho amin’izany toerana izany.
Iankinan-javatra maro tokoa izay ho praiminisitra ho lany eo satria izy no hitantana ny fifidianana ho avy. Raha ny ady toerana izay mitranga amin’izao fotoana izao dia tsy hisy fifidianana hadio sy mangarahara eo fa tsy maintsy hitanila izay voafidy amin’izany. Tsy ho azo antoka noho izany ny hampilamina ny fifidianana satria tsy maintsy haka ny antoko pôlitika nihaviany sy ny olona ho tohanany izay ho lany eo. Toa hadino tanteraka ankehitriny ny fanovana izay takian’ny vahoaka Malagasy fa lasa any amin’ny ady toerana ny raharaha.
-Ingahy Florent Rakotoarisoa no kandidan-Ratsirahonanana Norbert Lala izay voalaza fa isan’ny nandrafitra sy nanome hevitra ny HCC ka nahatonga izao raharaha izao. Mpomba an’i Hery Rajaonarimampianina izy andro vitsivitsy lasa izay ary dia nitsimbadika any amin’ingahy Andry Nirina Rajoelina indray ankehitriny. Tsy dia mahagaga izany satria izany no fomban’ity oloben’ny fitsarana sy ny mpitarika ny antoko AVI (Asa vita no ifampitsarana) ity. Voalazan’ny mpahay tantara fa nolovany tamin’ny raibeny tamin’ny andron’ny faha mpanjaka izao fombany izao ka isan’ny nahatonga an’i Madagasikara ho zanatany frantsay.
-Ingahy Edgard Razafindravaha indray dia natolotry ny antoko ADN (Antoka sy dinan’ny Nosy) izay antoko mivoy ny federalista avy eto Imerina.
-Henri Rabary-Njaka dia natolotra ny Hvm izay mpanorina ity antoko ity. Minisitra ny raharaham-bahiny amin’izao fotoana izao.
-Ingahy Mahazoasy Freddie indray dia sady HVM no depiote 79 no manolotra azy amin’ny toeran’ity PM ity.
-Ramatoa Attalah Beatrice izay natolotry ny HVM ihany koa ary misy ny komity iraisam-pirenena manohana azy.
-Ramatoa Hanitra Razafimanantsoa no kandidan’ny antoko TIM izay miaraka amin’ingahy Ravalomanana Marc ary isan’ny mpitarika ny fihetsiketsehana etsy amin’ny 13 may miaraka amin’ireo depiote 72 namany.
-Ramatoa Razanamahasoa Christine, mpitolona mafana foe o amin’ny kianjan’ny 13 may ary natolotra ny antoko Mapar.
-Yvette Sylla no isan’ny mpifaninana tohanan’ny Mapar sy ny Frantsay, izay lazaina fa isan’ny olona akaiky an’i Andry Nirina Rajoelina sy Frantsay monina eto Madagasikara koa izay heverin’ny maro fa mametraka ny dian-tanany amin’izao raharaha izao.
-Hary Andrianarivo izay depiote avy any Ambositra. Tsy dia heno loatra ity olona ity nefa miasa mafy amin’ny hipetrahany amin’izany toeran’ny praiminisitra izany koa.
Raha voatendry ho praiminisitra ny iray amin’ireo olona ireo dia hilamina ve ny raharaha pôlitika eto Madagasikara?
Hadio araka ny ilain’ny vahoaka Malagasy azy ve ny fifidianana raha ny iray amin’ireo no ho lasa praiminisitra, ary hahavoavaha ny olana mianjady amin’ny firenena ankehitriny ve? Fanontaniana apetraka ny Malagasy maro izany ankehitriny.
Fiovana : Ho sahy toa an’i Paul Kagame ve i Andry Rajoelina?
Fampitaovana ny Tafika : Tanteraka ny fanirian’ny amiraly Didier Ratsiraka
Rinah Rakotomanga : Asio fanajana fa mahamenatra
Firaisamonim-pirenena : “Hoentina aiza ity ady amin’ny kolikoly ity?”
Fitsarana ady amin’ny fanjakana : Nandresy ireo sefo ZAP noroahina noho ny fifidianana
Tononkalo : « Fetim-pirenena »
INTY SY NDAY : Tena mahaleotena ve ny firenena malagasy ?
Harena tsy ara-dalàna : Enjeho hatramin’ny mpangalatra tany aloha
Fiainam-pirenena : Mampiray ny Malagasy ny Barea
Fetim-pirenena : Malazolazo ny fankalazana fa tsy mety ho masaka